Ciidamada PMPF-ta Puntland oo fuliyey howlgallo ka dhan ah Al-Shabaab iyo Daacish | Somali National Television - sntv.so
Home AMNIGA Ciidamada PMPF-ta Puntland oo fuliyey howlgallo ka dhan ah Al-Shabaab iyo Daacish
Ciidamada PMPF-ta Puntland oo fuliyey howlgallo ka dhan ah Al-Shabaab iyo Daacish
Ciidamada ilaalada Badda iyo Beriga Puntland ee PMPF ayaa hawlgallo qorshaysan saacadihii la soo dhaafay ka fuliyey dhulka Buuraleyda ah ee ku yaalla gobollada Bari iyo Sanaag, gaar ahaan deegaanada Durduri, Ceelaayo, Dhadhaab, Warbid, Majayahan iyo Togga Dhagcaan.
Deegaanadaas waxaa la sheegay in mararka qaar ay weerarro ka geysan jireen kooxaha Argagixisada ah ee Daacish iyo Al-Shabaab.
War kasoo baxay Ciidamada badda Dowlad Goboleedka Puntland ee PMPF ayaa lagu yiri, “Ciidamada Badda Puntland ee PMPF waxaa markasta ka go’an u qareemidda shacabkooda, ka jiridda dhulkooda falalka liddiga ku ah horumarka, ka cidhibtiridda Baddooda Burcadda, Jiriifka, Mukhaadaraadka, Kalluumaysiga sharcidarada ah, Hubka kootarabaanka ah iyo waxkasta oo wadanka dhib ku ah.”
Wararka ayaa waxaa ay intaasi ku darayaan in Ciidamada ilaalada Badda iyo Beriga Puntland ee PMPF ay howlgalkooda ku gaareen degaannada Durduri iyo Ceelaayo, halkaas oo la sheegay inay horay u joogi jireen Xubno ka tirsan kooxda Argagixisada ah ee Daacish iyo Al-Shabaab.
Previous articleShir looga hadlayey Istaraatiijiyadda Sare u qaadista isticmaalka Gaaska Cuntada oo Muqdisho lagu soo geba-gabeyay “SAWIRRO”
Next articleWasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya oo gaaray dalka Turkiga